Mod magaabay: Sida loo jar Files mod
> Resource > Video > Sida loo jar Files mod
Sida loo jar Files mod
Ka soo qaad in aad isticmaalayso kaamirada sida JVC Everio iyo FS100 Canon iwm in ay toogtaan videos. Waxaad doonaa files badan mod on your computer, iyo marka ay timaado tafatirka mod, waxa ay noqon kartaa wax aad u madax xanuun. Tani waa sababta oo ah qaabka mod aan la garan karaa ugu qalab video tafatirka, gaar ahaan Mac. Sidaas waxa aad sameyn karto haddii aad doonayso in aad qabato qaar ka mid ah shaqooyinka tafatirka mod, sida jarida files mod?
Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) ( Filmroa u Mac (Originally Wondershare Video Editor for Mac) ) waa software video tafatirka ugu fiicnaa ee aan soo aragnay. Waxa ay taageertaa dhammaan qaabab video iyo bixisaa badan oo hawlaha tafatirka awood badan, oo ay ku jiraan video jaritaanka. Aragtidayda, waa gabi ahaanba aad ugu fiican doorasho goynta mod. Isticmaal in aan kala tagno mod galay clips ama laga gooyay qeybo ka mid aan loo baahnayn oo ka diiwaan files mod fudayd. Dabcan, waxa kale oo aad ka bedel kartaa files mod dheeraad ah oo la isticmaalayo hawlaha kale tafatirka this app ee.
Halkan, waxaan idinku inta badan ku tusaan sida loo gooyay files mod arrintan splitter mod smart on boosteejo Windows ah. Dadka isticmaala Mac, waxaad kala soo bixi kartaa oo rakibi version Mac halkan, ka dibna tixraac Users Mac "Guide haddii u baahan.
Talaabada 1: files Import mod in this magaabay mod
Ka dib markii socda app this, waxaad u baahan tahay in ay doortaan 16: 9 ama 4: 3 ratio ikhtiyaar in ay galaan ay interface ugu weyn. Markaas riix "Import" doorasho ku bar menu in ay dajiyaan aad files mod deegaanka. Ka dib markii in, faylasha mod ku daray in loo qori doonaa album User ee this splitter mod.
Talaabada 2: Iska yaree files mod
Jiid file ah mod aad rabto in aad ka go'een album in ay Jadwalka ka. Next, aad u baahan tahay si ay u dhinto faylka mod galay clips. Si aad u samayn, kaliya jiidi sare ee cas Time Tusiyaha inuu u dhaqaaqo Tusiyaha Time si ay booska saxda aad rabto, ka dibna riix badhanka maqas ah. Isla markiiba, file badan mod waxaa loo kala qaybiyay laba qaybood. Ku celi howlgalka lagu soo gooyay file mod soo galeen dhowr xabbadood. Haddii ay jiraan clips ka mid ah aad dooneyso in aad ka saarto, kaliya iyaga ku dhacay oo riix "Qashinka karaa" icon si ay u tirtirto.
Hadda, aad si fiican u badbaadin lahaa mashruuca loogu gurmad ujeedada. Just riix badhanka ee geeska bidix ee kore ee interface ka, ka dibna dooro "Save sida" doorasho.
Talaabada 3: dhoofinta abuurka video ah
Ka dib markii previewing saamaynta uu furmo kulanka xiisaha leh ee, aad dhoofin karo qanacsan aad video abuurka. Si aad u samayn, kaliya riix "Abuur" button in arbushin ilaa uu suuqa kala Output, halkaas oo aad leedahay afar hab oo wax soo saarka: Device, Qaabka, YouTube iyo DVD. Hadda, mid ka mid dooro sida ay baahidaada final.
Fiiro gaar ah: Haddii aad rabto in aad soo dhoofsadaan video clip kasta galay file fudud, aad dajiyaan karaa Project badbaadiyey mar kale iyo mar kale in ay dhoofiyaan dhiganta video clip mar kasta.
Sida loo Edit mod Video Files